Reverse Osmosis Kurapa Midziyo
Kudzosera Osmosis Maitiro:
Mbishi mvura → Mbishi mvura pombi → Multi-midhiya firita → Inoshanda kabhoni firita → Mvura softener (inosarudzika) → Precision firita → Yakakwira yekumanikidza pombi → Chekutanga reverse osmosis → PH gadziriso → Mvura yekuchenesa tangi → Pombi yemvura → Pasteurization → Microporous firita → Mvura kuburitsa .
Sekondari Reverse Osmosis Maitiro:
Mbishi mvura → Mbishi mvura pombi → Multi-midhiya firita → Kushanda kabhoni firita → Mvura softener (sarudzo) → Precision firita → Kumanikidza pombi → Chekutanga reverse osmosis → PH kugadziridza → Mvura tangi → Sekondari reverse osmosis (reverse osmosis membrane ine mhosva dzakanaka pa pamusoro) → Mvura yekuchenesa tangi → Pombi yemvura → Pasteurization → Microporous Sefa → Mvura kuburitsa.
Chekutanga danho pretreatment. (Sand firita)
Iko kushandiswa kweakawanda-epakati epakati quartz jecha mafirita, chinangwa chikuru kubvisa mvura ine sediment, manganese, ngura, colloid zvinhu, michina kusvibiswa, zvimisirwa solids uye zvimwe zvidimbu mune iri pamusoro 20UM yezvinhu zvine njodzi kuhutano. Iyo yakasviba turbidity iri pasi pe0.5NTU, CODMN isingasviki 1.5mg / L, simbi yezvinhu isingasviki 0.05mg / L, SDI isingasviki kana yakaenzana ne 5. Mvura firita rudzi rwe "panyama - chemakemikari" maitiro, mvura kuburikidza negranular zvinhu kana zvakasarudzika firita tsvina yemvura uye colloidal kuturika. Sefa inonatsa mvura yekuchenesa uye kurapwa kweiyo huru maitiro mukugadzirira kwemvura yakachena chinhu chakakosha maitiro.
Chechipiri danho prereatment (Carbon firita)
Yakagadziriswa kabhoni mafirita anoshandiswa kubvisa iyo pigment mumvura, kunhuwidza, huwandu hwakawanda hwemakemikari uye zvipenyu, kudzikisira iyo yakasara kukosha kwemvura uye mishonga yekuuraya zvipuka uye zvimwe zvinokuvadza zvinosvibisa.
Maumbirwo eakaomeswa mafirita ekabhoni uye mafirita ejecha equartz, mutsauko unoiswa mukati memasimba akasimba ekushambadzira ekabhoni yekubviswa neiyo quartz jecha firita isina firita kunze kwezvinhu zvakasikwa, kushambadzira kweakasara chlorine mumvura, achishandisa mvura kupfuura zvishoma. Kupfuura kana kuenzana neklorini 0.1ML / M3, SDI isingasviki kana yakaenzana ne4, yakasimba makemikari makemikari chlorine, kune mhando dzakasiyana dzekukuvara kwemembure, kunyanya, reverse osmosis membranes inoteerera klorini. Uye zvakare, iyo yekumisikidza maitiro, pamusoro payo activated kabhoni kuti iumbe isiri-yekristallini zvikamu zvemamwe maoksijeni-ane anoshanda mapoka, aya mapoka anoshanda anogona kuve nekemikari adsorption yeakagadzika kabhoni chinogadzirisa oxidation enhau dzakaipa, kudzoreredza iko kuita, inogona kunyatso bvisa ioni dzinoverengeka dzesimbi mumvura.
Chechitatu danho pretreatment (Resin softener)
Cationic resin inoshandiswa pakunyorova kwemvura, kunyanya kubvisa kuomarara kwemvura. Iko kuomarara kwemvura kwakakura calcium (Ca2 +), magnesium (Mg2 +) ion inogadzirwa, painenge iine mbishi yemvura kuomarara ioni kuburikidza nebwe resini, mvura yeCa2 +, Mg2 + yakachinjaniswa nebwe adsorption, uye zvimwe zvinhu panguva imwechete iyo mhando yekuburitswa kwesodhiya Na + ions inoyerera ichibva kune inoyevedza iri mumvura inobviswa kubva kune yakanyoroveswa kuomarara kwemvura ions. Saka kuti unyatso kudzivirira inodzora osmosis membrane fouling.System inogona otomatiki kudzoka, uyezve yakatsvuka.
Chechina danho pretreatment (Micron firita)
Kukura kweparticle mumvura kubvisa zvimedu zvakanaka, mafirita ejecha anogona kubvisa madiki macolloidal mumvura, kuitira kuti turbidity yacho isvike 1 degree, asi zvakadaro pamamirilita emvura kwemazana ezviuru ehukuru hwemashupu 1-5 microns colloidal particles, iyo kumanikidza pane iyi firita kuti ibvise mvura mushure mehukuru hwemasikweya zana kana zvishoma muzvidimbu zvidiki, kuti iwedzere kudzikamisa turbidity, kusangana nenzira inotevera yezvinodiwa zvemvura zvekudzivirirwa kwemaitiro anotevera anoshanda kwenguva refu.
Iyo Reverse Osmosis chishandiso mudziyo wekuchenesa mvura ine munyu pamwe nekuita kwekumanikidza musiyano weiyo semi-inokwanisika membrane. Inodaidzwa inonzi reverse osmosis, sezvo ichipesana negwara rekupinda chairo. Musiyano zvinhu zvine akasiyana osmotic kumanikidza.
Iyo reverse osmosis inogona kubvisa zvinopfuura 97% yemunyu unonyungudika uye pamusoro pe99% yeiyo colloid, microorganism, particles uye organic zvigadzirwa, ichiva chakanakisa sarudzo-yekutanga sarudzo midziyo muinjiniya yemvura yanhasi yakanatswa, yakanatswa kwazvo mvura uye nzvimbo mvura (yakanyanya kunatswa mvura). Izvo zvakanyanya kujekeswa maficha isishoma simba rekushandisa, hapana kusvibiswa, maitiro akareruka, emhando yepamusoro mvura uye mashandiro ekushanda pamwe nekugadzirisa.
RO ine yekugezesa tangi-RO ndiwo moyo wemvura yekurapa system, saka takagadzirira tangi yekuwachisa nekuchenesa mukati meRo kuti mitezo yeRo ishande kwenguva yakareba.
Pashure: Vacuum Emulsifying Unguent Muchina
Zvadaro: Stainless simbi tangi
sipo yekuzadza uye capping muchina
Pefiyumu Inotonhora Sefa
Mafuta akasanganiswa nemvura phacoemulsification burni ...
Tube Yemukati Kuchenesa Kuzadza uye Kuisa Mushini Machine